1 Kronike 25 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
1 Kronike 25:1-31
25 Ngokubhekele phaya uDavide neentloko+ zamaqela abakhonzi+ bahlulela inkonzo abanye boonyana baka-Asafu, uHeman+ noYedutun+ ababeprofeta ngeehadi,+ ngemirhubhe+ nangamacangci.+ Yaye kwinani lawo kwavela amadoda asemthethweni okuphumeza inkonzo. 2 Koonyana baka-Asafu, yayinguZakure noYosefu+ noNetaniya noAsharela,+ oonyana baka-Asafu ababephantsi kolawulo luka-Asafu+ owayeprofeta ngaphantsi kolawulo lukakumkani. 3 KuYedutun:+ oonyana bakaYedutun, yayinguGedaliya+ noTseri+ noYeshaya,+ noShimeyi, uHashabhiya noMatitiya,+ bebathandathu phantsi kolawulo lukayise uYedutun, owayeprofeta ngohadi ebulela yaye edumisa uYehova.+ 4 KuHeman:+ oonyana bakaHeman, yayinguBhukiya,+ uMataniya,+ u-Uziyeli,+ uShebhuweli noYerimoti, uHananiya,+ uHanani, uEliyata,+ uGidaleti+ noRomamti-ezere,+ uYoshebhekasha,+ uMaloti,+ uHotire,+ uMahaziyoti. 5 Bonke aba yayingoonyana bakaHeman, imboni+ kakumkani ezintweni zikaTHIXO oyinyaniso ukuze kuphakanyiswe uphondo; ngaloo ndlela uTHIXO oyinyaniso wanika uHeman oonyana abalishumi elinesine neentombi ezintathu.+ 6 Bonke aba babephantsi kolawulo lukayise ekuvumeni endlwini kaYehova, ngamacangci,+ imirhubhe+ nangeehadi+ zenkonzo yendlu kaTHIXO oyinyaniso. Ngaphantsi kolawulo lukakumkani yayinguAsafu noYedutun noHeman.+ 7 Inani labo bebonke kunye nabantakwabo ababeqeqeshelwe ukuvuma iingoma kuYehova,+ beziingcali bonke,+ lalingamakhulu amabini anamashumi asibhozo anesibhozo. 8 Ngoko benza amaqashiso+ ngezinto ezazimele zinyanyekelwe, omncinane ebefana kanye nomkhulu,+ ingcali+ kunye nomfundi. 9 Aphuma amaqashiso: elokuqala laba lelikaYosefu+ ngoAsafu, elesibini laba lelikaGedaliya+ (yena nabantakwabo noonyana bakhe babelishumi elinesibini); 10 elesithathu laba lelikaZakure,+ oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 11 elesine laba lelikaItseri,+ oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 12 elesihlanu laba lelikaNetaniya,+ oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 13 elesithandathu laba lelikaBhukiya, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 14 elesixhenxe laba lelikaYesharela,+ oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 15 elesibhozo laba lelikaYeshaya, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 16 elesithoba laba lelikaMataniya, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 17 eleshumi laba lelikaShimeyi, oonyana bakhe, belishumi elinesibini; 18 eleshumi elinanye laba lelika-Azareli,+ oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 19 eleshumi elinesibini laba lelikaHashabhiya, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 20 eleshumi elinesithathu, laba lelikaShubhayeli,+ oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 21 eleshumi elinesine, laba lelikaMatitiya, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 22 eleshumi elinesihlanu, laba lelikaYeremoti, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 23 eleshumi elinesithandathu, laba lelikaHananiya, oonyana bakhe nabazalwana bakhe, belishumi elinesibini; 24 eleshumi elinesixhenxe, laba lelikaYoshebhekasha, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 25 eleshumi elinesibhozo, laba lelikaHanani, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 26 eleshumi elinesithoba, laba lelikaMaloti, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 27 elamashumi amabini, laba lelikaEliyata, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 28 elamashumi amabini ananye, laba lelikaHotire, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 29 elamashumi amabini anesibini, laba lelikaGidaleti, oonyana bakhe nabantakwabo, belishumi elinesibini; 30 elamashumi amabini anesithathu, laba lelikaMahaziyoti,+ oonyana bakhe, belishumi elinesibini; 31 elamashumi amabini anesine, laba lelikaRomamti-ezere,+ oonyana bakhe, belishumi elinesibini.
1 Kronike 25